को-रोना देखी बच्न भनेर गुर्जो सेवन गर्नुभएको छ ? यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर ! – Annapurna Daily
को-रोना देखी बच्न भनेर गुर्जो सेवन गर्नुभएको छ ? यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर !
On May 26, 2021 2,276
काठमाडौं – कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि पछिल्लो समय बहुऔषधीय गुण भएको गुर्जोको खोजी हुन थालेको छ । कोरोनाभाइरसको त्रासकाबीच गुमनाम गुर्जोको एकाएक चर्चा हुनथालेपछि घरघरमा रोप्न थालिएको छ ।
प्रतिरोध क्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउने गुर्जोको शहर बजारमा पनि निकै माग भइरहेको छ । आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले पनि रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढाउन जडीबुटी गुर्जोको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसको लहरा ज्वरो, रुघोखोकी र चिसोमा लाग्ने बाथलगायत अन्य अधिक रोगको औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । फाइदा के छ ?शीतल गुण भएको गुर्जोको सेवनले गर्मीबाट टाउको दुखेको, आखा पिसाब, पैताला हात खुट्टा र जीउ पोलेको र पुरानो ज्वरोलाई निको पार्न सहयोग पुर्याउछ । त्यस्तै युरिक एसिड तथा वाथ र जोर्नी दुखाइको समस्याहरुको लागि लाभकारी मानिन्छ ।
जन्डिस, कलेजोको कमजोरी र विकारलाई पनि हटाउँछ । यो उच्च रक्तचापको रोगीको लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । किड्नीको दुर्बलता तथा विकारलाई हटाएर पिसाब सम्बन्धी सबै समस्या कम गर्छ ।
पेट पोल्ने र उल्टी आउने बिरामीको लागि पनि यो फाइदाजनक छ । यसको प्रयोगले मुटुलाई बलियो बनाई मुटु सम्बन्धी रोगमा फाइदा गर्दछ । गुर्जोले इन्सुलिन उत्पादनमा सहयोग गरी मधुमेहमा फाइदा पुर्याउछ ।
एजेन्सी-साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! को- रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।